July 8, 2021 N88LeaveaComment on यसरी गरिँदैछ एमालेलाई एकताबद्ध घोषणा, फेरि एकपल्ट राजनीति उलटपुलट !
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) कार्यदलले विवाद समाधान खाका तयार गरिसकेकाले पार्टी एकताबद्ध भएको घोषणा हुने भएको छ । कार्यदलको आज दिउँसो सिंहदरबारमा भएको छलफलमा पार्टीभित्रको विवादलाई सहमतिका आधारमा अन्तिम रूप दिने तयारी भएको हो । एमाले नेता सुवास नेम्वाङले आज साँझ पुनः कार्यदलको बैठक बसी पार्टीभित्रका सबै समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । दिउँसो बसेको कार्यदलको […]
‘प्रचण्ड नेतृत्वकाे नेकपा (माओवादी केन्द्र) असंवैधानिक’
July 8, 2021 N88LeaveaComment on ‘प्रचण्ड नेतृत्वकाे नेकपा (माओवादी केन्द्र) असंवैधानिक’
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टी संविधान र प्रचलित अन्य कानून अनुसार चल्नुपर्दछ। तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) कानून बमोजिम चलेको छैन। त्यही कुरा निर्वाचन आयोगमा पुगेर जानकारी दियौं। त्यो विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतसँग छलफल गर्‍याैं। २०६४ सालमा नेकपा (माओवादी) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको होे। २०६५ सालमा एकीकृत नेकपा माओवादी बन्यो। २०६९ सालमा […]
एमाले कार्यदल बैठक सकिएपछि निराश हुँदै घनश्याम भुसालले दिए यस्तो प्रतिक्रिया !
July 8, 2021 N88LeaveaComment on एमाले कार्यदल बैठक सकिएपछि निराश हुँदै घनश्याम भुसालले दिए यस्तो प्रतिक्रिया !
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी सकिएको नेपाल पक्षका नेताले बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार दोस्रो पटक बसेको बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि प्रगति शून्य भएको हो । बैठकबाट निस्कँदै नेपाल पक्षका नेताहरुले अन्योलपूर्ण प्रतिक्रिया दिए । नेता घनश्याम भुसालले चाहिँ १० दिनदेखि केही पनि […]
नर्भिकमा उपचाररत कलाकार निशा घिमिरेलाई एक्कासी के भयाे ? भेन्टिलेटरमा सारियाे !
July 8, 2021 July 8, 2021 N88LeaveaComment on नर्भिकमा उपचाररत कलाकार निशा घिमिरेलाई एक्कासी के भयाे ? भेन्टिलेटरमा सारियाे !
काठमाडौं। काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत कलाकार तथा मोडल निशा घिमिरेको दाँतले आफ्नै गाला टोकेकी छिन् । आफ्नै दाँतको टोकाइबाट गालाको भित्री भागमा गहिरो चोट लागेपछि उनलाई भेन्टिलेटरमै राख्नुपरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार कलाकार घिमिरेले केही दिनअघि आफ्नै दाँतले गाला टोकेपछि अत्यधिक रक्तश्राव भएको थियो । रक्तश्रावका कारण श्वास फेर्न कठिनाई भएपछि उनलाई […]
फेसबुकमा चिनजान गरी महिलालाई कम्बोडिया पुर्‍याएर बेचिएकाे खुलासा
July 8, 2021 N88LeaveaComment on फेसबुकमा चिनजान गरी महिलालाई कम्बोडिया पुर्‍याएर बेचिएकाे खुलासा
काठमाडौँ । फेसबुकबाट चिनजान गरी एक महिलालाई गिरोहले कम्बोडिया पुर्याएर बिक्री गरेको पाइएको छ । त्यहाँस्थित कन्स्ट्रक्सन तथा व्यापारको काममा रु एक लाख मासिक तलब पाउने आश्वासन दिएर धनकुटाका ३५ वर्षीय किसान राईको संलग्नतामा बेचबिखन गरिएको प्रहरीले आरोप लगाएको छ । उनले पीडितसँग रु चार लाख ५० हजार लिई काठमाडौँबाट काँकडभिट्टाबाट भारतको आसाम, नागाल्याण्ड, ग्वाटी […]
बाढीपहिरो र डुबानमा परी ५१ जनाको मृत्यु, ७१ जना घाइते
July 8, 2021 N88LeaveaComment on बाढीपहिरो र डुबानमा परी ५१ जनाको मृत्यु, ७१ जना घाइते
काठमाडौँ। अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी गत जेठ ३० गतेदेखि बिहीबार दिउँसोसम्म ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरूमा २६ जना पुरुष, १५ जना महिला, ५ जना बालक र ५ जना बालिका रहेका छन् । तीमध्ये सिन्धुपाल्चोकमा ५ जना, डोटीमा ४ जना, रोल्पा, तनहुँ, दाङ, पाल्पा, दार्चुला र […]
अन्ततः ओलीसँग मिलेर एमाले एकढिक्का गर्न माधव नेपाल तयार, यस्तो हुनेभयो सम्झौता !
July 8, 2021 N88LeaveaComment on अन्ततः ओलीसँग मिलेर एमाले एकढिक्का गर्न माधव नेपाल तयार, यस्तो हुनेभयो सम्झौता !
काठमाडौं । सत्तारुढ एमालेभित्रको विवाद मिलाउने विषयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले लचिलो हुने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन र पार्टी संरचनालाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेपछि बसेको नेपाल समूहको बैठकले विवाद निरूपणका लागि वार्ता र छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल […]
यस्तो आयो सुजिता भण्डारीको पोस्टमार्टम रिपोर्ट ! के छ रिपोर्टमा ?
July 8, 2021 N88LeaveaComment on यस्तो आयो सुजिता भण्डारीको पोस्टमार्टम रिपोर्ट ! के छ रिपोर्टमा ?
काठमाडौ । हराएको केही दिन पछि मृ त भेटिएकी सुजिता भण्डारीको घटना थप रहस्यम बन्दै गएको छ । घटनास्थलमा फेला परेका केही बस्तुले घटना रहस्यम बनाएको हो । घटनाको सत्यतथ्य छानविनको माग राख्दै स्थानियले अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरुले प्रहरीले ल्याउँदै गरेको शव समेत रोकेका छन् । असार ११ देखि सम्पर्कविहीन भएकी […]
साउन १ गतेबाट के बिदेशबाट आफन्तले ल्याइदिएका फाेन सबै बन्द हुन्छ त ?
July 8, 2021 N88LeaveaComment on साउन १ गतेबाट के बिदेशबाट आफन्तले ल्याइदिएका फाेन सबै बन्द हुन्छ त ?
काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा नै खरीद गरिएको मोबाइल फोनमा इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर(आइएमईआई) नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ । प्राधिकणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक हिसाबले नियमानुसार आयात भई नेपालमा नै खरीद भई प्रयोगमा रहेका मोबाइल सेटको पुनः आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ । मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री […]